Wararka Maanta: Isniin, July 30, 2012-Ra'iisul Wasaaraha Somalia oo muujiyay rajada uu ka qabo in la Ansixiyo Dastuurka oo uu weli muran ka taagan yahay
Wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil oo ka mid ahaa xubnihii la socday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay sida ay howsha u socoto isagoo tilmaamay in kulammadu ay si wanaagsan u socdaan isagoo sheegay in ergada iyo guddiga farsamo ay si wadajir ah u wada shaqeynayaan.
“Ra’iisul wasaare howshu waxay u socotaa si wanaagasan waxaana la gudo galay dooddii ku saabsanayd dastuurka... waxaa laga dooday xeer hoosaadkii waana la ansixiyay, dastuurkana waa loo wada aqriyay ergada, waxaana howsha si hufan u wada ergada ansixinta dastuurka iyo guddiga farsamada,” ayuu yiri Xoosh oo ka warbixinayay sida uu kulanku u socdo.
Wasiirka ganacsigga iyo warashadaha, Cabdiwahaab Ugaas Xuseen ayaa aad uga mahad-celiyay howsha ay ergada ansixinta dastuurka hayaan, wuxuuna wax lagu farxo ku tilmaamay sidii wanaagsanayd oo ay u ansixiyeen ergada iyo guddiga farsamada xeer hoosaadka dastuurka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo ugu dambeyn hadlay ayaa kula dardaarmay ergada u fadhida ansixinta dastuurka inay howsha dedejiyaan maadama uu waqtigu ciriiri yahay.
"Waa inaad dadaal muujisaan waana ku faraxsanahay sida aad howsha u qaybiseen; waxaana rajeynayaa inta dhimana inay si wanaagsan u dhameystirmi doonoo hadduu Alle yiraahdo," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la hadlayay ergada ansixinta dastuurka.
Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inay rajo aad u wanaagsan ka qabaan in la ansixiyo dastuurka, iyadoo hadalkiisa uu imaanayo xilli ay mas'uuliyiinta hay'adda culummada Soomaaliyeed sheegeen in qodobbo dastuurka ku jira ay ka horimaanayaan diinta Islaamka.